Sida loo sameeyo ganacsi | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Baro sida loo sameeyo ganacsi kuu gaar ah
Weligaa ma doonayay in ay bartaan sida loo sameeyo ganacsi? Lahaanshaha ganacsi kuu gaar ah waa hab fiican si ay u noqon madax-bannaan oo ay noqoto hawlan bulshadaada. Halkan waxaa ku qoran toban derejo oo aad qaadi karto si ay u sameeyaan ganacsi:
1. Raadi fikradaada
Ka bilow fikrad aad u fiican! Waxaa jira fikrado badan oo ganacsi ee adduunka, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in la qaado waqti aad la timaado aad fikrad u gaar ah. Sabab kale oo wanaagsan si ay u bilaabaan ganacsi waa haddii aad aragto baahida ah in aan la kulmay ee suuqa. Haddii uu jiro dalab waxaa loogu talagalay, waxaa laga yaabaa in aad u soo jeedin kartaa fikrad ganacsi guul. Samaynta cilmi suuqa kale oo ay kuu arko haddii ay jiraan waa baahida ah alaabtaada ama adeeggaaga. Idinka soo ururin karaa warbixin ku saabsan warshadaha, macaamiisha, iyo meelaha ugu fiican ee aad ku bilaabeyso ganacsi ee. Qaar ka mid ah cilmi-baarista suuqa yihiin sahan, waraysiyo, iyo kooxaha.
2. Qiimee farsamooyinkaaga
Ka hor inta aadan bilaabin ganacsi, aad u baahan tahay in aad adiga isweydiisid: waa maxay xirfadaha? Maxaad jeclaan samaynaya? Waa in aadan u tagaan ganacsiga oo kaliya in ay lacag sameeyaan, sidaas darteed soo qaado meel in aad daneyneyso in. Ka dib marka aad ka heli wax aad xiiso u, qaado waqti aad si daacad ah loo qiimeeyo haddii aad leedahay xirfad lagama maarmaanka ah oo dhigaya in ay ganacsi. Ma leedahay aqoon ku filan iyo waayo-aragnimada ay si waxtar leh ganacsi? Haddii aad, aad ka hor awoodo iyo quusin galay shaqada oo ay bartaan marka aad dhaaftid. Laakiin haddii aadan haysan wax xirfad ah ama aqoon ku filan, waxaa jira wax badan oo ka mid ah khayraadka inuu kaa caawiyo inaad yareyso farqiga in. Waxaad tegi kartaa laybareeriga degmadaada si aad u buugaag ku saabsan maamulka ganacsiga jeexjeexay, qaataan fasalo online, ama ku biiro dhacdooyinka ganacsi. waxan u samaynaysaan kaa caawin doona inaad hesho dad sax ah oo kaa caawin in aad fikrad nolosha ii geeyn lahaa.
3. Qor qorshe ganacsi
qorshaha waxqabadka ganacsiga A waa hage lagu sharxayo gool ganacsi iyo sida aad u qorsheeyaan si ay u gaaraan. Kol haddii aan qorshe ganacsi waa muhiim maxaa yeelay waxa ay tilmaamaysaa waxyaalaha muhiimka ah ee aad ganacsi. Haddii aad u baahan tahay taageero si ay u bilaabaan ganacsigaaga, aad muujin kartid qorshahaaga ganacsi dadka waxaa laga yaabaa in diyaar u damiir ama dhaqaale ahaan aad u taageeraan.
4. Soo qaado magaca iyo goobta
Magacaaga kaa caawin kara inaad ka kun ee ganacsiyada kale Istaaga. Mid ka mid ah habka aad ku taagan kartaa waa in aad doorato magaca ah in ay fududahay in dadku xusuusan. magacyada qaar ka mid ah waa ay fududahay in la xasuusto sababta oo ah waxay u sheegi macaamiisha dhab ahaan waxa ay samayn (tusaale Suuqa Dover Fish). Qaar kale waxay istaagi kartaa sababtoo ah waa gaaban oo uu faham ay yihiin (tusaale Amazon).
Waxa kale oo aad dooran kartaa dhigyo, ama dhegeeda, kaas oo noqon kara qawl iibinta gaar ah (USP). USP waa istaraatijiyad waxaad isticmaali kartaa in la kala saaro ganacsigaaga ka dadka kale. Waa in aysan noqon mid gaar ah si aad u, oo aad u leeyihiin in ay noqon in ay u caddeeyaan oo u soo dejin awood. Waa weedh gaaban in dadka xasuusan karo oo waa sheegtaa lacagta in macaamiisha ay ka heli doontaa.
Marka labaad, aad u baahan tahay si aad u hesho meel aad ganacsi. Iyada oo ku xidhan nooca ganacsigaaga, meesha aad sidoo kale saamayn ku yeelan kara guusha ganacsigaaga. Hubi in aad baadhitaan iyo u hesho meesha saxda ah. Mararka qaarkood, meel jaban laga yaabaa in ugu wanaagsan si loo badbaadiyo lacag. Xaaladaha kale, ma waxaad ku guulaysan doonaa haddii aad ku sugan tahay Ra'iisul meel dadka aad ka arki kartaa.
5. Dooro qaab-dhismeedka ganacsi
Waxaa jira dhawr nooc oo ganacsi ee dalka Mareykanka. Waxay leeyihiin shuruudaha kala duwan iyo qaab-dhismeedka. Noocyada ugu badan ee ganacsatada yihiin; qofeed, Partnership, Corporation, iyo Mas'uuliyadda Company Limited. Dhamaan iyaga ka mid ah waxay leeyihiin faa'iidada iyo khasaaraha marka ay timaado samaynta qaab-dhismeedka ganacsi. Waxa ugu muhiimsan waa in la fahmo waxa baahida ganacsiga yihiin iyo doorashada qaabka ganacsiga xaq ku haboon baahidaada ganacsi. Baro wax badan oo ku saabsan qaabdhismeedka ganacsiga.
6. Diiwaangeli ganacsi
Waxaa jira dhawr wax laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad samayso si aad u diiwaan galiso ganacsiga:
Diiwaangeli magaca ganacsi la gobolkaaga, sidaa darteed waxa uu noqonayaa unug sharci iyo (xaaladaha inta ugu badan) joojin doonaa kuwa kale ee gobolka ka ganacsi magac la mid ah.
Codso aad federaalka iyo gobolka tirada ID canshuurta. Waxaad u baahan doontaa tirada si ay u bixiyaan canshuur. Lambarka ID canshuurta federaalka waxaa kaloo loo yaqaan aad Lambarka Aqoonsiga Shaqeeyaha (A) oo la soo saaray by IRS. Lambarka ID canshuurta gobolka waa bixinta cashuurta gobolka iyo la soo saaray by gobolkaaga. (mulkiilayaal Sole uma baahna lambarka aqoonsiga gobolka.)
ganacsiyo badan ayaa u baahan liisamada iyo ogolaashaha si sharci ah ku shaqeeyaan ganacsigaaga. Raadi idmo gobolka iyo federaalka iyo wuxuu shatti aad u baahato inaad furto ganacsi sharci ah.
Ma u baahan tahay si ay u ilaaliyaan magaca shirkadda aad, alaabta, ama adeegyada? Waad awoodaa summad si cid kale oo dalka Mareykanka ah iyaga adeegsanayaa. Sidoo kale waa inaad hubiso si loo hubiyo in aadan isticmaalaya magac calaamadaysan by ganacsi kale.
7. Maal ganacsigaaga
Helitaanka lacag si ay u maal-ganacsigaaga waa weyn ugu tartami ganacsadaha ah. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu isticmaalo khayraadka sida kaydka, ama maalgashi qoyska iyo saaxiibada. Ama waxaad ka codsan kartaa amaah ka bangi. Tani waa meesha ugu at kaas oo aad ka heli Dhiniciisa Midig, si loo caawiyo maaraynta mustaqbalka dhaqaale iyo furatid xisaab bangi ganacsi.
8. Fur ganacsigaaga
Marka aad leedahay dhaqaale ku filan si uu u furo ganacsi, waxa la joogaa wakhtigii si ay u qotomiyey. Iyada oo ku xidhan ganacsigaaga, laga yaabaa in aad u baahan tahay xafiis, dukaanka, ama goobta kale. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaadhid hadii aad iibsato doonaa ama kiraysan bannaan ee ganacsigaaga.
Ka dib markii aad xafiiska ama dukaanka qotomiyey, markaas shaqada adag ee keeno alaabta iyo adeegyada aad bilaabmaa. Waxaad u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan adag tahay in la qotomiyey wax kasta sidaa daraadeed waxa uu ka codsanaysaa macaamiishaadu. Waxaad xitaa qabsan kartaa xirfadle in uu kaa caawiyo in aad si aad ugu qorshayso aad dukaanka ama xafiiska.
Macaamiisha raadinayso waayo-aragnimo ah marka ay shopping ama xitaa in ay xafiis. Haddii aad qabto khayraadka, waa fikrad aad u fiican si ay u abuuraan waayo aragnimo ah macaamiisha aad. Laakiin haddii aad kaliya laga bilaabo baxay, waa ka sii muhiimsan in ay leeyihiin adeegga macaamiisha weyn.
9. Raadi dadka xaq u
Waa maxay nooca shaqaale aad u baahan tahay si ay u soo nooleeya ganacsigaaga? xubnaha qoyska, saaxiibo, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga noqon kartaa hantida weyn u bilaabo baxay. Ama laga yaabaa in aad u baahan tahay geeddi-socodka ah qorista si aad u hesho shaqaale dheeraad ah. Waxaa laga yaabaa in geedi socodka dheer, laakiin haddii aad qaadato waqti si aad u hesho dadka xaq u, waxay bixin doontaa saami aad ganacsi.
10. Suuq-geynta iyo iibka
Ujeedada ganacsi ee ay heerka aasaasiga ah waa in la abuuro wax qiime leh oo u dhiib dadka beddelkeeda lacag. Suuq-geynta iyo iibka yihiin oo kaliya baabuurta ee xidhiidhka iyo bixinta qiimaha in macaamiisha aad. Haddii aad abuuray wax kasta oo qiime leh in dadku doonayaan, waa in aanay noqon oo aad ka cabsan lacag ka qaadashada. Oo, haddii alaabta ama adeegyada aad idinka samatabbixin la heer sare ah, soocin, iyo adeeg wanaagsan macaamiisha, aad ka badnaan doona dadka laga filayo. Haddii aad u qabanaynaa, waxaad ka heli doontaa macaamiisha ka badan maalin kasta oo faa'iido dheeraad ah si loo ballaadhiyo ganacsigaaga iyo is ogow naftaada iyo qoyskaaga ka mid ah.
Taasi waxa ay muhim in wax ganacsi ah: waxa ku saabsan dadka iyo hagaajinta meesha aad ku nooshahay iyo bulshada aad jidka. Waxaan kuu rajeynayaa guul weyn in xirfadaada ganacsi. Hadda, tag bilowdo ganacsi!
Baro sida loo qoraan qorshe ganacsi
Hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad qorshaha waxqabadka ganacsiga waa in ka mid ah